काठमाडौंमा चिनियाँ खोप : कुन उमेर समूहलाई कहिले ? – Sapana Sanjal
काठमाडौंमा चिनियाँ खोप : कुन उमेर समूहलाई कहिले ?
June 7, 2021 173
Sapana Sanjal : काठमाडौं महानगरपालिकाले चीनबाट ल्याइएको चिनियाँ भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा ५ दिनसम्म लगाउने भएको छ । मंगलबारबाट सुरु हुने खोप अभियानमा ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई समेटिने छ ।
महानगरपालिकाले तयार पारेको कार्यतालिका अनुसार जेठ २५ गते ६४ वर्ष उमेर समूहकालाई मात्रै खोप दिइनेछ । २९ गतेसम्म चल्ने खोप अभियानमा हरेक दिन फरक फरक उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
जसअन्तर्गत् २६ गते ६३ वर्षका, २७ गते ६२ वर्षका, २८ गते ६१ वर्षका र अन्तिम दिन अर्थात् २९ गते ६० वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको महानगरपालिकाका शहरी स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
कुँवरले खोप लगाउने केन्द्र भने सोमबार तय गर्ने जानकारी दिए । अधिकांश केन्द्रहरु पुरानै भए पनि एक/दुईवटा केन्द्र फरक हुने कुँवरले जानकारी दिए ।
Prevकुलमान घिसिङ र रबि लामिछाने लाई चुनाव लड्न आग्रह !
Nextसरकारले कहाँबाट लिँदैछ पौने ४ खर्ब वैदेशिक सहायता ?
आज पनि देशैभर पानी पर्ने, यि स्थानमा भारी वर्षा हुने सबै लाई सतर्क रहन मौसम बिभागको आग्रह,
दमकमा मोटरसाईकल दु र्घ टनामा परि विष्ट दम्पत्तीको घटना स्थ लमै मृ त्यु
यी हुन् तपाईंको आत्माले पुनर्जन्म लिएको संकेत दिने पाँच लक्षण